Ogaden News Agency (ONA) – Dawlada Ingiriiska oo Safaarad Ka Furanaysa Dalka Jabuuti.
Dawlada Ingiriiska oo Safaarad Ka Furanaysa Dalka Jabuuti.
Posted by ONA Admin	/ November 2, 2018
Dawlada Ingiriiska ayaa qorshaynaysa in ay shaqaaleysiiso ilaa 1,000 qof oo diblomaasiyiin ah, ayadoo doonaysa inay ballaariso xiriirka ay la leedahay dalalka dunida, ka dib marka ay ka baxdo midowga Yurub, sida uu Arbacadii sheegay Aoghayaha Arrimaha Dibadda, Jeremy Hunt.
Talaabadan ayaa keenaysa in la abuuro 12 xafiis oo hor leh, safaarado ama ergooyin, waxaana ku jira safaarad cusub oo Britain ay ka furanayso dalka Jabuuti. Waxaa kale oo xafiiska ay ku leeyihiin dalka Chad laga dhigi doonaa safaarad buuxda.
Kunka diblomaasi ee cusub ayaa 335 ka mid ah waxay ka shaqayn doonaan dibadaha, halka 328-na uu saldhigoodu ahaan doono xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada London, ayadoo 329-na ay noqon doonaan shaqaale cusub oo laga qoro dunida oo dhan.
Britain waxay xoogga saari doontaa shaqaale ku hadla luqadaha looga hadlo dalalka ay doonayso inay xoojiso xidhiidhka ay la leedahay.